कोरोना फैलाउने केन्द्र बन्नसक्छ गंगासागर मेला! – Health Post Nepal
कोरोना फैलाउने केन्द्र बन्नसक्छ गंगासागर मेला!
२०७८ पुष २७ गते ८:४४
काठमाडौं – भारतको पश्चिम बंगालको दक्षिण परगना जिल्लास्थित सागरद्विपमा गगांसागर मेलाको तयारी सुरू भएको छ। कलकत्ता हाइकोर्टको सशर्त अनुमतिपछि त्यहाँ मेलाको तयारी सुरू भएको हो।
तर, स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूले गंगासागर मेला हरिद्वारको कुम्भजस्तै कोरोना संक्रमणको ‘हटस्पट’ बन्नसक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्।
पश्चिम बंगालमा कोरोना संक्रमण तीब्र गतिमा बढिरहेको छ र नियन्त्रणका लागि राज्य सरकारले १५ जनवरीसम्मका लागि विभिन्न निर्देशनहरू जारी गरिसकेको छ।
खासगरेर प्रदेशको राजधानी कोलकाता र नजिकै रहेको उत्तर र दक्षिण परगना जिल्लाको अवस्था सबैभन्दा गम्भीर छ। त्यहाँ हरेक दिन हजारौं कोरोना संक्रमित फेला परिरहेका छन्।
मेलाको औपचारिक उद्घाटन १० जनवरीका दिन हुँदैछ। राज्य सरकारको अनुमानअनुसार १६ जनवरीसम्म चल्ने मेलामा यस वर्ष पाँच लाखभन्दा बढी तिर्थालु पुग्ने सम्भावना छ।
यस द्विपमा गंगा नदी बंगालको खाडीसँग जोडिन्छ। यसबारे एक भनाइ छ ‘अरू तिर्थ पटक–पटक, गंगासागर एकपटक।’ हरेक वर्ष देश–विदेशबाट लाखौं तिर्थालु गगांसागर मेलामा पुग्ने गरेका छन्। संगम स्नानपछि तिर्थालुले त्यहाँको कपिलमुनि मन्दिरमा दर्शन गर्ने गरेका छन्।
हाइकोर्टको सशर्त अनुमति
बंगालमा बढ्दो कोरोना संक्रमणलाई लिएर चिकित्सकहरूले गगांसागर मेला रद्द गर्न माग गर्दै कलकत्ता हाइकोर्टमा रिट दायर गरेका थिए।
सुनुवाइका क्रममा राज्य सरकारले कारोना मापदण्ड पालनागरी गगांसागर मेलाको आयोजना गर्न लागिएको तर्क गरेको थियो। मेलाको तयारी लगभग पूरा भइसकेकोले अन्तिम समयमा रद्द गर्न नसकिने राज्य सरकारको भनाइ थियो।
दुवै पक्षको तर्क सुनेर अदालतले मेला आयोजनाका लागि सशर्त अनुमति दिएको थियो।
हरेक दिन विज्ञापन गरेर मेलामा आउने तिर्थालुहरूलाई कोरोना संक्रमणको जोखिमबारे सरकारले जानकारी गराउनुपर्ने शर्त अदालतले राखेको थियो। सरकारले कुनै पनि धार्मिक समारोहमा एक साथ पचासभन्दा बढी मानिस एक ठाउँमा जम्मा हुन नपाउने निर्देशन यसअघि नै जारी गरिसकेको छ।
संशय र आशंका
अदालतको सशर्त अनुमतिका बाबजुद स्वास्थ्य विशेषज्ञ र राजनीतिक दलहरूले मेलाको आयोजनबाट संक्रमण तीब्र रूपले वृद्धि हुने आशंका व्यक्त गरेका छन्।
गत वर्ष हरिद्वारमा आयोजित कुम्भजस्तै यसपटक गगांसागर मेला कोरोना संक्रमणको प्रमुख कारण बन्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
पश्चिम बंगाल चिकित्सक फोरमका सचिव डा.कौशिकी चाकी भन्छन्,‘यो भोट बैंकको राजनीति हो। एकतर्फ सरकार सामाजिक दूरीमाथि जोड दिइरहेको छ। अर्कोतर्फ मेलामा पाँच लाख मानिस पुग्ने कुरा गरिरहेको छ। गएको वर्ष कुम्भ मेलापछिको अवस्था हामीले हेरिसकेका छौं। यो मेला पनि कोरोना संक्रमणको प्रमुख कारण नबनिदिओस्।’
स्वास्थ्य विशेषज्ञ डा.अरिन्दम विश्वास संक्रमणको वर्तमान अवस्थाको हिसाबले गगांसागर मेला रद्द गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्।
‘संक्रमणको स्थितिलाई हेर्दा यस वर्ष गगांसागर मेलाको आयोजना रद्द गरिनु पर्दथ्यो। मेलामा संक्रमण कैयौं गुणाले बढ्नसक्छ,’ उनी भन्छन्।
एक अर्का विशेषज्ञ डा.कुणाल सरकार पनि भोट बैंकसँग जोड्दै गगांसागर मेलालाई धर्म र राजनीतिको एकीकृत नमुना बताउँछन्।
पश्चिम बंगालमा कोरोना संक्रमण तिब्र गतिले बढिरहेको छ भने १९ जनाको मृत्युसमेत भइसकेको छ। प्रदेशको राजधानी कोलकातामा मात्रै ७ हजारभन्दा बढी नयाँ संक्रमित भेटिइसकेका छन्।
प्रदेशका अन्य जिल्लाहरूमा पनि संक्रमण वृद्धि हुन थालेको छ। गंगासागर मेला आयोजना हुने दक्षिण २४ परगना जिल्लामा पनि संक्रमितको संख्या हजारभन्दा माथि पुगिसकेको छ।
स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूले १६ जनवरीसम्म मेलाको परिणाम कम्तिमा एक सातापछि देखिने बताएका छन्।
गत वर्ष कुम्भको मेलामा सहभागी भएका नेपाली तिर्थालुहरू फर्केपछि नेपालमा पनि कोरोना संक्रमणको दर एक्कासी बढेको थियो। कुम्भमा सहभागी भएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह दम्पत्ति पनि संक्रमित भएका थिए।
पश्चिम बंगालको गगांसागर मेलामा पनि ठूलो संख्यामा पनि नेपालीहरू सहभागी हुने गरेका छन्।